Usoro - Ndụ Ndụ Ndụ - Geofumadas
Usoro - Ndụ Ndụ
Creo Parametric bụ imewe, nrụpụta na ngwanrọ nke ụlọ ọrụ PTC. Ọ bụ ngwanrọ na -enye ohere ịme ngosi, fotorealism, eserese eserese, mgbanwe data, n'etiti ihe ndị ọzọ na -eme ka ọ bụrụ onye ama ama n'etiti ndị nrụpụta igwe na ndị ọkachamara ndị ọzọ. AulaGEO na -ewepụta usoro ngosipụta 3D dị elu nke na -eji iwu Creo dị elu ...
Creo bụ ihe ngwọta 3D CAD nke na - enyere gị aka mee ka ihe ọkụkụ na - eme ngwa ngwa ka ị nwee ike mepụta ngwa ngwa karịa. Mfe na-amụta, Creo-ewe gị seamlessly site n'oge nkebi nke ngwaahịa imewe site n'ichepụta na karịrị. Nwere ike ijikọ arụmọrụ siri ike ma gosipụta ya na ihe ọhụụ ...
Ansys Workbench 2020 R1 Ọzọkwa AulaGEO na-eweta onyinye ọhụrụ maka ọzụzụ na Ansys Workbench 2020 R1 - Design na simulation. Na usoro a, ị ga-amụta ihe ndabere nke Ansys Workbench. Malite na mmeghe, anyị ga-enwe nyocha ngwa ngwa nke nyocha n'ezie nke a ga-ekpuchi n'ime usoro ahụ niile. Anyị ga ahụ…